#ကိုယ်ချင်းစာမိပါပြီ… – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
မြေဇင်း နည်းစနစ်နဲ့ အားထုတ်ထားတဲ့ ယောဂီတယောက်က သူ၏ အတွေ့ အကြုံများကို အပိုင်း လိုက်လေး တွေ ရေးပြီး တင်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့…မှတ်မိ နေပါ သေးသည်.. သူရေး တာ အပိုင်း ၁၇ ရောက်နေတဲ့ အချိန် စာရေးသူက သူ၏ post လေးကို တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ဖတ်ရှုမိခဲ့ သည်ပေါ့ …အဲ့ဒီ post ကို ရေးပေးတဲ့ ပိုင်ရှင် အကို ကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိခဲ့ရပါတယ်…သူက Public post ဖြင့် တင်ပေးထါး ခြင်းကြောင့်သာ… စာရေးသူ အလွယ် တကူနဲ့ FB မှာရှာ နိုင် ခဲ့ရတာပါ… ဒါမို့ ဖော် မပြတက် ရ လောက်အောင် ကျေးဇူး တင်လွန်း လို့ အဲဒီ အကို ကို ဖုန်းဖြင့် တမျိုး sms ဖြင့်တသွယ် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ပြောခဲ့ရ ပါတယ်ရှင် တကယ်ကို စာရေးသူ ၏ ကျေးဇူးရှင် များ စာရင်းထဲတွင်ထိပ်ဆုံးကနေ ပါနေခဲ့ရပါတယ်…။
ဒါမို့…ငါ့ အလှည့် ကျရင်…ငါ့လို လူတွေ များ ရှိနေ ခဲ့ရင် အလွယ် တကူ ရှာလို့လွယ်အောင် ဆိုပြီး စာရေးသူ ၏ စာစု လေးများ ကိုလည်း Public Post နဲ့ တင်ပေး ခဲ့တာ ပါ…စာရေးသူ တုန်းက ခု လိုမျိုး online မှာ လွယ်လွယ် ကူကူ နဲ့ မောင်းထောင် မြေဇင်း နည်း စနစ်အား ထုတ်ခြင်း တို့ အ တွေ့အကြုံများ share တဲ့ post တို့ဆိုတာ…အရမ်းနည်းပါးသေးတာမို့… ကျမ်းစာတွေဖတ်ပြီး… အားထုတ် ချင်စိတ် တွေ တ ဖွားဖွား ပေါ်ပေါက် လာချိန် မှာ…ဘယ်သူ ကများ အား ထုတ် ဖူးမလဲ ဆိုပြီး FB မှာ ရှာဖွေ မွှေနှောက် မိခဲ့ရ ပါတယ်…ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ အတွေ့အကြုံတွေကို မေး မြန်းချင်လို့ပါ…အမေးချင်ဆုံး အရာ ကတော့…နတ်ပြည်က ဘုရားကို ဖူးလို့တကယ် ရတာလား? ဘယ်လို ဖူးတာလဲ?ဘယ်လိုရောက် သွားတာလဲ?တကယ်ရော ဖူးလို့ရတာလား?နတ်ပြည်ဆိုတာ တကယ်ရှိနေတာပေါ့ဟုတ်လား?အလင်းနိမိတ် ဆိုတာကရော ဘာကြီးလဲ?အလင်းနိ မိတ်ရပြီဆို တလော ကလုံး ကို ကိုယ်ကြည့် ချင်တာ မှန်သမျှ ကြည့်လို့ ရတာလား..?စသော စသော မေးခွန်း များကို မေးချင်မိခဲ့တာပါ…။
အဲ့ဒီထက် မပို ခဲ့ပါ…ဘာလို့ ဆိုတော့ စာရေးသူ ဝိပသာနာ ဆိုတာကို စိတ် မဝင်စားခဲ့ လို့ပါ…ငယ် ငယ်ထဲက ဝိပသာနာ ဆိုတဲ့ စကားလုံး များနဲ့ ရင်းနှီး လာခဲ့ သူမို့… မိမိ မသိသေးသော သမထပိုင်း ကိုသာ လွန်စွာစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါ…ဒါမို့လည်း…တကယ် အားထုတ် ဖူးတဲ့တယောက်ယောက်ကို ဖြင့် တွေ့လို့ ကတော့…. ကွာ….ငါ… ဒါတွေ အရင် မေးမယ်… ဆိုပြီး…မောင်းတင် ထားခဲ့ တာပါ… နောက်ပြီး တကယ်သာဆိုရင်တော့ ငါလည်း ရအောင်လုပ်ကြည့်မယ်…ပြီးရင် အလင်းနိမိတ် ရပြီ ဆို ငါကြည့် ချင်နေတဲ့ အရာ တခုရှိတယ်… အဲ့ဒါကို ငါအရင်ကြည့်မယ် ကွာ…ဆိုပြီး… မိမိဖာသာ တယောက် ထဲ အတွေး များနှင့် ချာလပတ် လည်နေတုန်း…အဲ့အကိုရဲ့ post လေးကို ဖတ်မိရာက cb ကနေ hi ပြီး မိတ်ဆက် ခဲ့ပါ တော့တယ်…အဲ့ဒီ အကို ရေးတာ အပိုင်း စုစု ပေါင်း ၂၃ ပိုင်း ပါ.. သူရေး ထားတဲ့ သမထပိုင်း အပိုင်း များကို အသေး စိတ်ဖတ်ခဲ့ ပါတယ်…Save ထားပြီး အကြိမ် ကြိမ် ပြန်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်…ဝိပသာနာ ပိုင်းများ ရေးထား တာကိုတော့ ကျော်ဖတ်ပါတယ်… အကုန် အစုံမဖတ်ပါ… ဖတ်ချင် စိတ်လည်းမရှိပါ စိတ်လည်း မဝင်စားပါ ..ဒါနဲ့ စာရေးသူ စိတ်ဝင်စား တဲ့ အပိုင်း တွေကို အဲ့အကို ကို cb ကနေ မေးပါတော့တယ်..အတော်ကို ကျေးဇူးတင် ရတာပါ… စိတ်ရှည် လက်ရှည် နဲ့ စာရေးသူမေးသမျှကို အသေးစိတ် ဖြေပေး ရှာတာပါ….လူတိုင်း က သူ့အ လုပ်နဲ့သူ ကိုယ်စီရှိကြတာမို့ မိမိလို အသေးစိတ်တွေမေးတဲ့သူကို အဲ့အကိုက သေသေချာချာ ဂရု တစိုက်လေး ကိုပြန် ဖြေပေးတါပါ.. အားထုတ် ဖြစ်အောင်အား ထုတ်ဖြစ် ဖို့လည်းမှာ ခဲ့ပါတယ်.. စာ ရေး သူ ကလည်း အလွန်ကို တုံးလွန်းအလွန်းသူမို့ တချို့အရာတွေ ခရေစေ့ တွင်းကျကို မေးခဲ့ တာပါ..စာရေးသူဟာ အတော်အမေးအမြန်းထူသူတယောက်ပါ…။
ငယ်ငယ်က အမေး အမြန်းထူးလို့ ခဏခဏ အရိုက်ခံရပါတယ်…စာရေးသူက ဉာဏ်တုံး ပါတယ် တချို့ အရာတွေ အသေးစိတ် နှိုက်နှိုက် ချွတ်ချွတ် မေးမှကို နားလည် သဘော ပေါက် သူပါ…ဒါမို့ တခါတလေ စာရေးသူ လို အသွင်တူများရှိနေခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ စာရေးသူစာများကို ရေးတဲ့အခါ မှာ အသေး စိတ် ရေး ပေးလေ့ရှိ ပါတယ်…ဒါ ဟာ…စာရေးသူ နဲ့ နှိုင်းစာမိ ကိုယ်ချင်း စာမိ လို့ပါ.. ဉာဏ်ထက်သူများအနေနဲ့တော့ သိပ်ရှည်တာပဲ… ဟွန့်… .. လို့..မြင်ချင် မြင် နေမှာပါ…(ဒါလေး က စာရေးသူ ဉာဏ် တုံးကြောင်း လေး ကြွား တာပါ )ဆိုတော့… အထက်က ပြောခဲ့ သလို… ပါပဲ.. အဲ့ အကို ကို အသေးစိတ် တွေ မေးလေ ပြီကော….အကုန် အစအဆုံး ဖြေပေးခဲ့ တဲ့ အပြင် သူရေးထားတဲ့စာတွေထဲမှာ တချို့ ရေးလို့မကောင်းလို့ ချန်ထားခဲ့ ရတဲ့ အပိုင်းများကိုပါ… စာရေး သူ ကို ဘယ်သူမှ လျှောက် မပြော နဲ့နော် ညီမလေး ဆိုပြီး…သူမြင် ရတာတွေ ပြော ပြတာလေ… စာရေးသူလေသိလား… ဘယ်လို ပြောရမလဲ… အရမ်းကို ကျေနပ်ဝမ်းသာ အံ့သြ မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရ တာပါ…အကယ် ကိုအံ့သြ ခဲ့ရတာပါ…အားလည်း အရမ်းကျခဲ့ ရပါတယ်… အဲ့အကို ပို့ပေးတဲ့ စာ လေးကို အိမ်သားတွေကို အကုန်လိုက်ပြ ပြီး တအံ့တသြနဲ့ ပြန်ပြီး ဖောက်သယ်ချ မိခဲ့ ပါတယ်… အဲ့ အကိုပြောတာ မှန်လိုက်တာ ဘယ်သူမှ မပြောနဲ့ ညီမလေး ယုံကြမှာ မဟုတ်ဖူး… တဲ့.. ဆို တာလေ…သိပ်ကိုမှန်တာပဲ… ။
စာရေး သူ ကသာ အားရ ဝမ်းသာ နဲ့ တွေ့လား တွေ့လား ဒီမှာ ဒီမှာ ကြည့်… ဆိုပြီး..စာ ကို ဖတ်ပြ လိုက် ရှင်းပြ လိုက်ရတာ…အိမ်သား တွေကတော့… တုတ်တုတ် မှ မလှုပ်… မကောင်း တက်လို့… အင်း…အင်း.. ဆိုပြီး.. ဒါလေးပဲ ပြန်ပြော ခဲ့ပါတယ်..အဲ့ဒီ နေ့ကစလို့ သားဋေတည်ခဲ့တဲ့ စာရေးသူ စိတ်ထဲ…ဒီမြေးဇင်းနည်းကို ငါအားထုတ်ကို ထုတ်ရမယ်..ငါလည်းငါ့ဘဝတွေအရမ်းသိချင်တယ် … ငါ.. ခုလို ဒုက္ခ တွေနဲ့ ကြုံနေ ရတာ ငါ ဘယ် ဘဝက ဘာတွေ လုပ်ခဲ့ မိလို့လဲ… စသော စသော အားထုတ် ချင်သော ပြင်းပြ စိတ်များ ပြင်း ထန်ခဲ့ရ ပါတယ်…အဲ့အကို ကို စတင် မေးမြန်း ပါပြီ… ဝါယူ ဝါမှတ် ဆိုတာ ဘယ်လို မှတ်ရ တာလဲ ?..စာ ထဲ ပါတဲ့ အတိုင်း မှတ် ရမှာလား…အဲ့ တုန်းက စာရေးသူက ပါရဂူ ကျမ်းတွေ အကုန် ဖတ်ထား ပြီးပြီ မို့ အားထုတ် နည်းတွေ စာအုပ် တွေထဲ ပါ တာမို့ သိ ထား ခဲ့ ပါ တယ်…နောက် ပြီး.. ဆရာ အောင်ဝင်းထွန်း ရဲ့ အသံfile တွေ ကို လည်း နား ထောင်ပြီးလိုက်လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်ပါ…ဘဘဦးဌေးလှိုင်အသံ file တွေဆိုတာ အိပ်ရာဝင်တေး သီချင်းတွေလိုအလွတ်နီးပါးရလို့နေခဲ့ရပါပြီ ..ဒါမို့…အဲ့လို မိမိဖာသာစာအုပ်တွေဖတ် အသံfile တွေနာကြားပြီး ကျင့်နေတဲ့အချိန်မို့… ခုလို အရှင်လတ်လတ် မြေဇင်းနည်းစနစ်နဲ့ အားထုတ် ထား တဲ့ လူကိုယ်တိုင် ကြီးကိုလဲ တွေ့ရော..ဘယ်နေ ပါတော့မလဲ..အသေးစိတ်တွေကိုပြန် မေးလေပြီ ပေါ့နော်..။
အဲ့လိုနဲ့ အဲ့အကို သင်ပေးတဲ့အတိုင်း အိမ်မှာ တနေ့ ဝါယူ ၇၀၀ လောက်ရ အောင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်… တနေ့မှာ စာရေးသူ အဲ့ အကို​ ကို မေးပါပြီ…အကိုရေ စိတ်ညစ် လာပြီ ခု ထိလည်း အလင်း နိမိတ် က မရသေးဘူး..ဘယ်လို လုပ်ရ မလဲဟင်? ဝါယူ ဘယ်လောက် အမှတ်လောက်ဆို အလင်းက ရလာ တာလဲဟင် ? ဘယ်လို လုပ်မှ အလင်းက ရတာ လဲဟင် ? ထိုင်ချိန် ကြာချိန်နဲ့ ဆိုင်လား.. ? ဝါယူဝါမှတ်နဲ့ဆိုင်လား?..အကိုကရော ဘယ်ချိန်ဆိုအလင်းရလဲ?အကိုက ဘယ်လောက် ဝါ ယူဝါ မှတ် ဆို ရ တာလဲ?ခုရောရ နေ သေးလား?ရပြီးရင် ဘာ လုပ် နေလဲ?ခု နီပွန် က တထိုင် ထဲ ၃၀၀ ဆက်တိုက် ရအောင် မှတ်နိုင် ပေမယ့် ဘာ အလင်းမှ လဲမရဘူး အကိုရေ ..အလင်းက ဘယ်လို လုပ်မှ ရမှာလဲ ဘာလို နေလို့လဲ?..ကဲ….. ဒီ မေးခွန်း တွေကို မေးမိခဲ့တဲ့ စာရေးသူဟာလေ…. အခု ချိန်မှာ….အဲ့အကို စကား တွေကို ကြားယောင်မိပြီး အရမ်း ကိုယ် ချင်းစာ မိနေ ခဲ့ရ ပါပြီ ကော…. အဲ့အကို က သူ့ အတွေ့ အကြုံ အ တိုင်းလေး ပြန် ဖြေ ပေးရှာ ပါတယ်…ဒါ ကို အား မ ရသေး တဲ့ စာရေးသူ က…မဟုတ်ဖူးအကို…နီပွန် အရမ်းစိတ် ချမ်းသာ ချင်တယ် အကို တို့လို ဖြစ်ချင်တယ်.. .အေးချမ်း ချင်တယ်…နီပွန် ဒီအလင်း နိမိတ်ရ မှကို ဖြစ်မယ် အကို…ဒါမှ နီပွန် စိတ်ချမ်း သာမယ် အကို…ကဲ .. .. ကြည့်ကြပေတေါ့ အရပ်ကူတို့…တို့ရေ..ဇွတ်… ..အဲ့လို တ ဇွတ် ထိုး တ ဇောက် ကန်း ငါတကော… တ…ငါ.. ငါ… နဲ့… နေခဲ့တဲ့… စာရေးသူပါ… အဆွေတို့ရေ….လိုချင် တာမ ရရင် ပစ္စည်း တွေ ပေါက် ခွဲ.. အို… ဆက် ပြော ရင်..အင်း…ဒီထက် ဆိုးတာ တွေကို သာ ရေးပြ ရ ရင်… တော့စာ ရှုသူတွေ အကုန် ဖုန်းတွေ လွတ်ကျပြီး လန့်ကုန် မှာဆိုးလို့ မရေး တော့တာပါ…သို့သော် တခါတလေ ကြုံရင် ရေးပါဦးမည် ဆိုပါစို့…။
စာရေးသူ တနေ့ တနေ့ တဂျီ တဂျီ နဲ့ အလင်း နိမိတ် မရလို့ စိတ်ညစ် ညူးနေတာ ကို အဲ့အကို ကို ..သူ့အဖြေကို အားမရလို့…ထပ်ခါ ထပ်ခါ မေးနေခဲ့ရတာ… အခု မိမိကိုယ်တိုင် ပြန်လည် ခံစားလို့ နေရတဲ့ အ​ခြေ အနေ တခုမို့…အဲ့အကို ကို စာရေးသူ နားလည် ကိုယ်ချင်းစာမိသွားခဲ့ရပါတယ်…. ဆိုတာ… ကို.. ပြောပြချင်မိတာပါ… ကျေးဇူးလည်းအရမ်းတင်ပါတယ်….အဲ့အကို ပြန်ဖြေပေးတဲ့ အထဲ က လိုရင်းနဲ့ အထိ ရောက်ဆုံး စကားလေးတွေကတော့..ညီမလေး… ညီမလေးက အလင်း ရတော့ ဘာလုပ် မလုပ်လို့?..ညီမလေး ကြည့်ချင် တာကို မြင်ရ ပြီဆိုရင်ရော ငါ့ညီမက တကယ် ရောစိတ် ချမ်းသာ မှာလား..ဝဋ်ကျွေး ပါရင် အကုန် ဆပ် ရတယ် ငါ့ညီမ ရဲ့. ဝဋ်ကျွေး အကြောင်း သိချင်ရင် အနာဂါမ် ဆရာသက်ကြီး စာအုပ်ကိုဖတ် ကြည့်ပါငါ့ညီမ..(ချက်ချင်းဖတ်ခဲ့ပါတယ် အ ရမ်းကိုသံဝေဂရခဲ့ပြီး.အော်..ငါသူ့လောက်မဆိုးသေးပါလားဆိုတဲ့motivateရခဲ့ပါတယ်သူလိုအရိယာတယောက်တောင်ဝဋ်ကျွေးဆပ်ရတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရလို့မိမိလိုလူဘာဆန်းတုန်းလို့ခံစားမိ သွားခဲ့ပါတယ် အင်မတန်ကို ကောင်းတဲ့ စာအုပ်ပါ)အခု ညီမ က ဝါယူဝါမှတ် လုပ်နေတဲ့အ ချိန်မှာ အပြင်ကအတွေးတွေ ကိလေသာတွေ မဝင်ဖူးလေ အဲ့အချိန် ချမ်းသာနေတာပဲ မဟုတ် ဖူးလား..အလင်းကရတော့လဲ.. အကိုတို့က အခုဆို ဝိပသာနာပိုင်းကိုပဲ အားထုတ် နေပြီဖြစ် လို့ သူ့ကိုမကြည့်တော့ဘူးလေ…ဝိပသာနာ ပိုင်းရောက်အောင်ကျင့်မှ တရား အစစ်တွေ့မှာ ငါ့ညီမ…. လိုချင်နေသမျှ ဆင်းရဲနေဦးမှာ… ဝိပသာနာ ကမှ တကယ့်တရားစစ်ကိုပြတာ…ငါ.မရှိ.. မှ တော့.. ငါ့ဥစ္စာ…ငါ.. ပိုင်တာဘာ ရှိသေးလို့တုန်း…ခု ညီမ က.. တရား အားထုတ် ရင်း စိတ်မှာ ကိလေသာ ပြန်ဖြစ် နေတာလေ…အခု စိတ်က အတွေး နောက်မ လိုက်ပဲ နှာသီးဖျား ဝင်လေ ထွက်လေ မှတ် နေတဲ့နေရာလေး မှာပဲရှိနေတဲ့အချိန် ..ကဲ.. မချမ်းသာဘူးလား..။
ဒါ သည်ပင် တရား ပေါ့ ညီမလေး ရယ်…အကို တို့က အပူ ထဲမှာ အေးအောင် နေတက် သွားရုံက လွဲလို့ ကျန်တာ ဘာမှမပြောင်းလဲသွားပါဘူး…ဒါမို့ အခု အလင်းနိမိတ် မရသေးတာ အရေး မကြီး ဘူးလေ… ညီမ ထိုင်နေ တဲ့ အချိန် ၁နာရီ ဆို တနာရီ ချမ်းသာ နေတယ်လေ…. အမြဲချမ်းသာဖို့ အ တွက်က ဝိပသာနာ အပိုင်း ကို နားလည် သဘော ပေါက် အောင် အားထုတ် မှရ မယ်ညီမ…ဆရာ ကောင်းကိုရှာပါညီမ…ခုလိုညီမ စိတ်ဆိုး စိတ်ပျက်နေတာတွေကို သတိနဲ့ မသိမချင်း ညီမဆင်းရဲ နေမှာပဲ…တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ကိုယ်သိအောင်လုပ်တာလေ…အခု ညီမ တရားကို ပြန် လို ချင်တဲ့ လော ဘ ဖြစ်ပြီး..လော ဘကိလေသာ ပူ လောင် တာခံနေ ရတာ လေ.. တရား ပေါ်ပြန်ဖြစ် တဲ့ လိုချင် စိတ်လော ဘ ဟာလည်း… လောဘ ပါပဲ… ညီမ..ကိလေသာ တွေ ကပ်ညှိလာတိုင်း သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်နေမှ ညီမ လိုချင်တဲ့ ချမ်းသာ ရမှာပေါ့…စိတ်ကို ဖြေလျော့ ထားလိုက်ပါ…ပုံမှန်လေး ဘာမှ မလိုချင်ပဲ.. စိတ်ကလေးကို…အေးအေးထားပြီး ပြန်မှတ် ပါနော်. … ဒဲ့…ကဲ…. သူ့ခမျာ… တရားသဘော… သဘာဝတွေကိုပဲ… ပြောပြပေးသွားတာပါပဲ…(အဲ့အချိန် က သဘောတရားဆိုတာလည်းမသိ.. သဘာဝ ဆိုတာလဲ မသိတဲ့အချိန်ပေါ့.. သဘာဝနဲ့ သဘော တရားဆိုတာကို သေသေချာချာ သိသွားမှ တရားရတယ်ဆိုတာလဲနားမလည်တဲ့အချိန်ပါ…။
သဘာဝ သဘော တရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာကိုပင် တရားအားထုတ် တယ် ခေါ်တာဆို တာ လည်း မသိခဲ့ပါ..တခုပဲ သိခဲ့ ပါတယ်…ငါ… လိုချင်တာ ရမှ ကျေ နပ်မယ် ဆိုတဲ့…ကိလေသာ ကို ချစ်တဲ့ စိတ် သဘာဝ တရားတွေ ကို ဆန့်ကျင် ချင်တဲ့ စိတ်တို့ သာ ရှိခဲ့ ပါသည်..လက်ခံ နိုင်ဖို့ လက်ခံ မယ်ဆို တဲ့စိတ် စိုးစဥ်းမျှ တောင် မရှိခဲ့ပါ..)သို့သော်…. ဒီ ကိလေသာ ထူလဗျစ်အိုး နီပွန်စံ ကျေနပ် သွား လိမ့်မယ် ထင်ပါ သလား ချစ်ဆွေတို့….No….No….No… ပါ….သူမ လုံး ဝ မကျေနပ် ခဲ့ပါဘူး….သူတို့က…ရနေကြတော့.. ငါ့ ကိုကျ……ဘလာ….ဘလာ… မကျေနပ် စိတ် များစွာဖြင့် မသိစိတ် အတွေးများ စွာဖြင့်… ရိပ်သာ ဝင်ဖို့ကို လုံးလုံး လျားလျား ဆုံးဖြတ် ခဲ့ရလေ သည် မဟုတ် ပါလား….ထို အငုပ် စိတ် ကိလေသာ ထူထူ ကြီးနဲ့ အကြမ်း စား လောက် တောင် မ ပယ်ဖူးသော စာရေးသူ တယောက် ဟာ… ရိပ်သာ လည်းရောက် ရော..မိမိရဲ့ ကိလေသာ နှိိပ်စက် လေတော့ ချစ်ဆွေတို့လည်း ဖတ်ပြီး လောက်ရောပေါ့…စာရေးသူ ကိုယ်တွေ့ရေးထားတဲ့ အစော ပိုင်းအ ပိုင်း တွေမှာ..ဒီ အလင်းနိမိတ် မရ လို့ ဆိုပြီး ရိပ်သာ ကနေ ပြန်ဖို့ ထိ ဆုံးဖြတ် ခဲ့တယ် ဆို တာလေ…အင်း…အဲ့အချိန်… ပြန်သာ လာခဲ့ လို့ကတော့…ချစ်ဆွေတို့လည်း…ယခုလို စာမျိုး တွေ ဖတ်ရှုခွင့်မရတော့မယ့်အပြင်…နီပွန်စံ တယောက် ကိလေသာ ဝန်ထုပ်ကို ကြောမှာပိုး လို့…အမေ ကယ်ပါ…အဖေကယ်ပါ…ငါစိတ်ချမ်းသာချင် လို့ပါ…ငါ့ကိုကယ်ကြပါ…ကယ်မယ့်သူကို လိုက်ရှာ နေလောက်ပါပြီကော…။
ခန္ဓာဝ န်ထက်ကိလေ သာဝန်က ပိုလေးတယ် ဆိုတာ သွေးထွက်အောင်မှန်တာနော်…တနေ့တနေ့ ပူလောင်နေတာပဲ….မိမိဒုက္ခရောက်နေတာ တစုံတယောက် က ကယ်မှပေးမှရမယ်…ကယ်သူကို လိုက်ရှာ နေခဲ့တာပါ…ကယ် မယ့်သူ က မိမိစိတ်ပဲ ဆိုတာ သိကို မသိ ရိပ်ကို မရိပ် မိခဲ့ တာပါ…ဒါ ကြောင့်မို့….ယခုဆိုရင်ဖြင့်…Online တရားစခန်း အပတ် စဥ်တိုင်း အပတ်စဥ်တိုင်း….အမြဲတမ်း ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အရာလေးတွေက…ခုလို စာရေးသူလို လူမျိုးတွေ ပါလာနေတက်တာပါပဲ… ဒါမို့ ….စာရေးသူ သိပ်ကိုယ် ချင်းစာမိ ပါတယ်….. ဘာလို့ဆို… တာ… ချစ်ဆွေ တို့….သဘောပေါက် လောက်ပြီထင်ပါရဲ့…ဒါမို့….မိမိလို ဘဝတူများကို မိမိတုန်းကလို မဖြစ်စေချင်သော စိတ်စေတနာ အပြည့်ဖြင့်…ဤစာစုလေးကို ရေးပေးလိုက်ရပါတော့သည်ချစ်ဆွေတို့…ချစ်ဆွေတို့ဘက်မှ တခု ခု သိလိုက် ရတယ် ဆိုလျှင် ဖြင့်…Comment မှာ မိမိ တို့ ခံစားမိ သည်များကို ချန်ပေး ခဲ့လို့ ရပါ တယ်ရှင်..စိတ်ရှည်စွာသီးခံဖတ်ပေးလို့ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့် .